Allgedo.com » 2011 » March » 08
Home » Archive Daily March 8th, 2011 Dagaal Culus oo ka socda degmada Ceel-Waaq ee gobolka Gedo. Mar 8, 2011 Iska horimaadyo qadhaadh ayaa caawa fiidkii ka qarxay degmada Ceel-Waaq ee gobolka Gedo saacado kadib markii ay magaaladaasi galeen ciidamada Dowladda KMG ah.
Rasaas aad u xoogan iyo madaafiic ay is dhaafsanayaan ciidamada Dowladda ee Ceel-Waaq ku sugan ayaa laga maqlayaan deegaanada ku xeeran maagaalada.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay xoogag aan weli lagaran heybtooda ay weeraro laba geesood... Maxamed Cabdi Kaliil oo beeniyay in uu yiri “cid kasta oo mabaadi’da yada kasoo horjeeda waan dileynaa” Mar 8, 2011 Luuq, Somalia (AOL) – Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo maanta qadka Teleefanka nagula soo xariiray asaga oo ku sugan degmada Luuq ayaa beeniyay war ay qaar saxaafadda ka mid ah tebiyeen oo sheegayay in uu yiri “cid kasta oo anaga naga tirsaneyd oo intay naga soo tagtay xoogagga Al-shabaab ku biiray waan dileynaa”.
Kaliil oo ka tirsan saraakiisha sar-sare ee hogaamineysa... Khilaaf soo kala dhaxgalay Mas’uuliyiinta Ururka Ahlusuna ee G/gaduud. Mar 8, 2011 Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhax galay saraakiisha Ururka Ahlusuna ee kasoo jeeda degmooyin katirsan Gobolka G/gaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa is khilaafsanaa hogaamiyaasha Ahlusuna Caabud-Waaq, Xeraale, Dhusamareeb balse khilaafka ayaa hadda weji cusub yeeshay.
Wararka naga soo gaaraya Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa xaqiijinaya in ay qoorta iskula jiraan Macalin... Socialist Party-Somalia Demands Somali President to Resign Mar 8, 2011 The newly formed Socialist Party-Somalia (SP-Somalia) condemned the bloody clashes in Beled Hawo, Mogadishu and other parts of the country, which left hundreds dead and calls for an immediate political dialogue in all groups.
In a statement released today after a council meeting in Djibouti, which calls a prompt ceasefire in all sides, also demands the resignation of Sharif Hassan government. SP-Somalia... Sheekh Cumar Faaruuq oo ku dhintay dalka Sacuudiga (Taariikh Nololeed). Mar 8, 2011 Allah ha u naxariistee- waxaa xalay wadanka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ku geeriyooday Sheekh Cumar Cabdi Suldaan [Sheekh Cumar Faaruuq] oo ahaa mufti weyn oo ku xeeldheeraa diinta Islaamka.
Sheekh Cumar Faaruuq wuxuu mudooyinkan dambe deganaa magaalada Riyad ee wadanka Sacuudiga, waxaana dhawanaahan uu ka sheeganayey xanuuno dhowr jeer uu isbitaalka la galay.
Geeridiisa waxaa maanta xaqiijiyey carruurtiisa... Ciidamada Dowladda KMG ah oo Caawa ku hoyanaya degmada Ceel-Waaq. Mar 8, 2011 Ciidamo katirsan dowladda KMG ah ayaa caawa ku hoyanaya magaalada Ceel-Waaq ee gobolka Gedo kadib markii ay halkaasi baneeyeen ciidamo katirsanaa Al Shabaab.
Maanta gelinkii hore ayay ciidamada Dowladda KMG ah ee tababarka kusoo qaatay gudaha Kenya gaareen Ceel-Waaq kadib markii ay halkaasi si nabad gelyo ah uga bexeen ciidamadii maamulka Shabaab ee Gedo.
Dad ku sugan degmada Ceel-Waaq ayaa sheegay... Somaliland oo adkeynaysa amaanka magaalada Laascaanood. Mar 8, 2011 Maamulka Somaliland ayaa wado howlgallo balaaran oo uu ku baadi goobayo raggii ka dambeeyay dil xalay magaalada Laascaanood loogu geystay sarkaal sare oo katirsanaa Somaliland.
Faah faahin dheeri ah ayaa kasoo baxeysa dil habeenkii xalay ahaa kooxo hubeysan magaalada Laascaanood ugu geysteen sarkaalkii ugu sareeyay Ciidanka Nabad sugidda Maammulka isku magcaabay Somaliland.
Sarkaalka oo lagu magacaabi... Radio Allgedo/ Waraysiyo